Xafladsoo dhaweyn ah oo Kuala Lambur loogu qabtey Madaxweyne xigeenka PL (Sawiro) – SBC
Xafladsoo dhaweyn ah oo Kuala Lambur loogu qabtey Madaxweyne xigeenka PL (Sawiro)
Waxaa isbuucii lasoo dhafayba aad looga dareemayey Dalka Malaysia Qabanqabada Xaflada soo dhaweynta Madaxweyne Kuxigeenka dowlada Puntland ee Somaliyeed Jen. Cabdisamad Cali Shire.
Madaxweyne ku Xigeenka Puntalnd oo ruuntii aad looga sugayey inay ka qabsoonto caasimada Kuala Lambur ee Dalka Malaysia waxana halkaa lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee Cayaaraha Hidaha iyo Dhaqanka Somaliyeed oo ay soo bandhigayeen barbaarta gaashaman ee walalaha kl, kama madhnayn heesaha wadaniga ah iyo madadaalada iyo Ruwayado aad u xiiso galiyey kasoo qabgalayaashii ka so xambaarsanaa fariimo ku socda Guud ahan umada Somaliyeed iyo Kooxaha nabad diidka ah .
Xafladan oo u soo qaban qabiyey masuulka qunsuliyada Puntland ay ku leedahay Wadanka Malaysia mudane axmed shibbin, ayaa waxaa kasoo qayb galay dhaman qaybaha kala duwan ee bulsahda somaliyed oo ay kamid yahiin ururda Ardayda Somaliada ee dalka Malaysia. Aqoon yahanada Somaliyeed ee ku nool Dalka malaysia, Ururada Haweenka iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan o ay kamid yahiin xubno ka socday Dawlada Dalka Malaysia iyo Ganacsato xiisaynaysa inay Xidhiidh Ganacsi dhexmaro Puntalnd iyo Malaysia, Xafladan oo ka dhacaysay mid kamida Hotelada ugu caansan Dalka Malaysia ayaa waxaa soo buux dhafiyey dadweynaha Somaliyeed ee ku dhaqan wadanka Malaysia.
Xafladan oo ku bilamatay jawi aad u dagan ayaa sidii caadada ahaydba waxa lagu furay ayadaha Quraanka Kariimka ah ee qawlka Eebe, inta kadibna waxaa microphone lagu lasoo dhaweyey Qunsulka Puntland u fadhiya Dalka Malaysia oo isagu Xaflada daah furay Mr.Ahmed Osman (Shibiin) oo halka kasoo jeediyey Khudbadii furitanka Xafladan oo uu kusoo dhaweynayey Madaxweyne Kuxigeenka Dawlada puntland.
Mr Shibiin ayaa si diiran usoo dhaweeyey imaanshaha Madaxweyne Kuxigeenka Puntland ee Dalka Malaysia wuxuuna aad ugu nuux nuuxsaday inay sharafweyn u tahay in Masuulka Labad ee Puntland uu cawa fadhiyo Xafladan ay so qabanqaabisay qunsuliyada Puntland ee dalka malaysia.
Sidoo kale waxa halkaasi khudbado kala gadisan kasoo jeediyey Aqoonyahada Somalida Dalka Malaysia iyo Ururada Ardayda somaliyeed ee waxka barta wadanka Malaysia, waxana kamid ahaa xubnihii halkaasi ka hadlay madaxa Jalaaliyadda Somaliyeed ee Dalka malaysia Dr. Muuse,Proff. Abdinasir Shuuriye oo kamid ah Aqoonyahanada xafladda kasoo qayb galay, Proff. Sayid Abdulle Hassan oo isna ahaa aqoon yahanada aadka looga yaqaan Dalka Malaysia ,iyo arday ku hadlayey magaca ardayda Somaliyeed ee Dalka Malaysia Mr. Abdifatah Mohamed Musse (Miraaf).
Intaas kadibna waxaa dadweyna halka kalahadlay Madaxweryne ku xigeenka Puntland Genaral. Cabdi Samed Cali Shire oo aad loo sugayey Khudbadiisa waxana hal mar is qabsaday Hoolka xafladu ka dhacyso sawaxan iyo sacab lagu soo dhaweynayo Madaxweynaha Isla markana waxaa dhamaanba is wada tagay kasoo qayb galayashii Xafladan oo run ahantii aad u xiisaynayey Araga iyo maqalka Gen Cabdi samed Ali Shire Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland.
Madaxweyna oo halkaasi kasoo jeediyey Khubad dheer oo aad u qiiro galisay Bulshada Somaliyeed ee kasoo qayb galay xafladan isago ka hadlay Tariikhda Wadanka Somalia isagoo aad ugu dheeraaday raadka xun ee uu ku reebay wadanka Somaliya gumaystuhu iyo marxaladiihii uu soo maray wadanku labatankii 20 sano ee burburka lagu jiray Isagoo shegay in burburka Somaliya ay ka qabqateen Dawlado shisheeye waloow ay jireen gacmo Somaliyeed oo cadowgu soo adeegsaday, Gen Cabdi Samed ayaa intaa raaciyey kuwii ka qaybqaatay burburinta Qarankii Somaliyeed inay wax badan isku ciil kaamiyeen falkaasi foosha xumaa ee burburintii Qarankii Somaliyeed isagoo sheegay hadii ay ogan lahaayeen dadkii burburshay Qaranka Umada Somaliyeed Inay sidan ku danbeynayso Xalada Dalka Somalia aysan waligood sameeyen Falkaasi foosha xun ee lagu burbushay Qaranimadii iyo sharaftii umada Somaliyeed.
Madaxweynah wuxuu halka kasheegay in Maamulka Puntland ku yimi rabitanka Umada dagan Gobolada Puntalnd kadib markii u burburay Qarankii Somaliyeed islamarkana ay diyaar u yahiin Shacab iyo Dawladba raadinta Qaranimadii Somaliyeed. Isla marna wuxuu madaxweynuhu cadeeyey inay Puntland tahay Meel ka dhaxaysa umada Somaliyeed ayna u furan tahay cidkasta oo Soomaliyeed oo kusoo biiraysa Puntalnd waxana hadaldiisii kamid ahaa “Puntland way ka gudubtay Qolomad tahay waxayna u gudubtay maxad taqaan”
Ugu danbayntii Wakiilka Dalka Malaysia U fadhiya Puntland Ahmed Osman Shibiin ayaa shahaado sharaf guddon siiyey madaxweyne ku xigeenka dowlada puntland ee soomaaliyeed ,waxayna xafladu ku so idlaatay jawi aad u qurux badan iyado ahayd xafladii ugu balaarnayd ee jaaliyada soomaliyeed ee dalka malaysia ay u dhigaan masuuul sare oo ka socda madaxda Soomaalida.
SBC Kuala Lambur Maleysia
waa wax lagu farxo in mudane general cabdi samad cali shire uu u tago jaaliyada puntladn ee malaysiya